बिजुलीको महशुल फेरि बढाइँदै, १५ प्रतिशतसम्म बढाइने ! « GDP Nepal
बिजुलीको महशुल फेरि बढाइँदै, १५ प्रतिशतसम्म बढाइने !
Published On :7November, 2019 11:34 am
काठमाडौं । दक्षिण एसियामै सबैभन्दा महँगो बिजुली उपभोग गर्दै आएका नेपालीले विद्युत महशुलमा थप महँगी सामना गर्नुपर्ने भएको छ । विद्युत व्यापारमा एकाधिकारप्राप्त सरकारी कम्पनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १५ प्रतिशतसम्म विद्युत्को महशुल वृद्धि गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।
प्राधिकरणले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष महशुल वृद्धिका लागि प्रस्ताव गरेको हो । तर, आयोगले निर्णय भने गरिसकेको छैन । प्राधिकरणले प्रस्ताव गरे पनि आयोगले ल्याएको निर्देशिका अनुसारका सबै विवरण नपठाएकोले विवरणसहित पूर्ण रूपमा प्रस्ताव ल्याउनका लागि प्राधिकरणलाई आयोगले पत्र पठाउनेछ ।
आयोगले सबै विवरणको विश्लेषण गरेर उपभोक्तालाई समेत मर्का नपर्ने र विद्युत् प्राधिकरणले समेत घाटामा गएर मर्का नपर्ने गरी महशुलको वृद्धि गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ । प्रस्तावअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा दोब्बर अर्थात ६५ प्रतिशतसम्मको महशुल हटाइ २१ देखि २७ प्रतिशतसम्म घटाउन भनिएको छ ।